Izibonelo Ezi-3 Ezinamandla Zokuthi Ungayisebenzisa Kanjani I-Mobile App Beacon Technology ukukhulisa Ukuthengiswa Kwezebhizinisi | Martech Zone
NgoLwesine, Septhemba 16, 2021 NgoLwesine, Septhemba 16, 2021 UMichael Frederiksen
Ambalwa kakhulu amabhizinisi asebenzisa amathuba angafakwanga wokuhlanganisa ubuchwepheshe beacon kuzinhlelo zabo zokusebenza ukukhulisa ukwenza ngezifiso kanye namathuba okuvala ukuthengiswa okuphindwe kayishumi usebenzisa ukumaketha okusondelene neziteshi zokuthengisa zendabuko.
Ngenkathi imali engenayo yobuchwepheshe be-beacon yayiyizigidi eziyizinkulungwane eziyi-1.18 zamadola aseMelika ngo-2018, kulinganiselwa ukuthi ifinyelela emakethe eyizigidi eziyizinkulungwane eziyi-10.2 yamadola aseMelika ngonyaka ka-2024.
Imakethe Yomhlaba Wonke Yezobuchwepheshe
Uma unebhizinisi lokumaketha noma lokuthengisa, kufanele ucabangele ukuthi ubuchwepheshe be-app beacon bungazuzisa kanjani ibhizinisi lakho.
Izitolo zeMall, izindawo zokudlela, amahhotela, nezikhumulo zezindiza ngamanye amabhizinisi angasebenzisa ama-beacons ukukhulisa ukuthenga okuxakile, ukuvakasha, nokuphinda uvakashele ngokumaketha ngqo kumakhasimende angahle abe seduze ngezinhlelo zawo zokusebenza.
Kepha ngaphambi kokuthi sibheke ukuthi amabhizinisi angabusebenzisa kanjani lobu buchwepheshe ukukhulisa ukuthengisa, ake sichaze ukuthi buyini ubuchwepheshe be-beacon.
Ama-beacon yizidlulisi ezingenantambo ezingathumela idatha yokukhangisa nezaziso kuzinhlelo zokusebenza ezikuma-Smartphones ngaphakathi kobubanzi besibhakana. I-iBeacon yethulwe yi-Apple kuma-iPhones abo ngo-2013 kanti izingcingo eziphathwayo ezinikwe amandla yi-Android zilandele ukuhola lapho iGoogle ikhiphe i-EddyStone ngo-2015.
Ngenkathi i-Eddystone isekelwa kuphela ku-Android kusukela manje, zikhona imitapo yolwazi evulekile obusekela ngokugcwele ubuchwepheshe be-beacon be-app ku-Android, okwenza lonke iqembu labasebenzisi be-Android ne-iOS lithengiswe.
Ukuze amabhikhoni asebenze, adinga ukuxhumana nesamukeli (i-smartphone) kanye nohlelo lokusebenza olwenzelwe ngokukhethekile ukuqonda nokuphatha amabhikhoni angenayo. Uhlelo lokusebenza lufunda isikhombi esiyingqayizivele ku-smartphone ebhangqwe nesibani somyalezo ogcizelele ukuvela.
Ama-iPhones anobuchwepheshe beacon afakwe kwi-hardware, ngakho-ke izinhlelo zokusebenza zeselula akudingeki zisebenze ukuxhumana. Kumapulatifomu anikwe amandla yi-Android, izinhlelo zokusebenza kumele zisebenze ocingweni ukuthola amasiginali we-beacon, okungenani njengenqubo engemuva.
Abanye abathengisi abanezinhlelo zokusebenza ezinikwe amandla yizibani yi-CVS, McDonald's, Subway, KFC, Kroger, Uber, neDisney World.
Ngabe Ubuchwepheshe Beacon Obungasetshenziswa Kanjani Ekumaketheni?
Inzuzo enkulu ye- ubuchwepheshe beacon technology yithuba lokuthumela okunikezwayo okwenzelwe wena nemilayezo kumakhasimende asevele esondele. Kepha futhi kunesici se-analytics esisetshenziselwa ukuthola imininingwane enemininingwane yamakhasimende ngokuziphatha kwe-shopper ukukhulisa ukusebenza kwecebo lokumaketha.
Isibonelo 1: Thumela ukunikezwa kohlelo lokusebenza olususelwa endaweni endaweni yokupaka
Ukumaketha kungakhonjwa ngokwezifiso kwazise ibhekhoni ingathola uhlelo lokusebenza futhi yazi ukuthi ikhasimende lisondele, ngakho-ke likwenza kufaneleke kakhulu futhi kube lula ukuvakashela isitolo.
Lapho ikhasimende elingahle elinohlelo lokusebenza olufakelwe isitolo esithile lisondele lingena endaweni yokupaka, lingathola isaziso sesaphulelo esithile kuphela esihle sanamuhla futhi kubingelelwe umuntu siqu.
Ngokwenza lokhu, isitolo sisanda kudala i-1) umuzwa wokwamukela ohlanganiswe no-2) ukuphuthuma kokunikezwa okukhethekile okuhle kuphela ku-3) isikhathi esilinganiselwe. Lawa ama-ABC wokuguqulwa kokuthengwa nobuchwepheshe be-beacon bavele bawashaya wonke amaphuzu amathathu ngaphandle kokungenelela komuntu noma izindleko ezingeziwe. Ngasikhathi sinye, ithuba lokuguqulwa kokuthengwa lenyuka kakhulu.
I-Target ingesinye sezitolo zokuthengisa ezisebenzisa ubuchwepheshe beacon obuhambisana nohlelo lokusebenza lwe-Target ukusunduza izaziso kumakhasimende abo ezweni lonke. Amakhasimende azothola kuphela izaziso ezifika kwezingu-2 uhambo ngalunye ukuze angeqisi ukulayeza nokubeka engcupheni ukulahlwa kohlelo lokusebenza. Abathengi bezaziso bazothola okunikezwayo okukhethekile nezinto ezihamba phambili ezinkundleni zokuxhumana ukuze zikhuthazwe ngumthengi.
Isibonelo 2: Thola imininingwane ekuziphatheni kokuthenga ngaphakathi esitolo
Kudala kwaziwa ukuthi kubalulekile ukuthi uyifaka kuphi esitolo, njengokubeka uswidi ezingeni leso lezingane ngamarejista, ukunika izingane isikhathi esanele sokucela ukuthenga uswidi.
Ngobuchwepheshe be-app beacon imininingwane ibhekiswe ku-11. Abathengisi manje sebengalandelela ukusebenza komsebenzisi futhi bathole imephu eqondile yohambo lwekhasimende ngalinye esitolo, ngolwazi lokuthi bama kuphi, kuthengwe ini, nokuthi yisiphi isikhathi sosuku esitolo.
Imininingwane ingasetshenziselwa ukuhambisa i-inventory yokwenza ngcono ukuthengisa. Izinto ezidumile ziboniswa ezindleleni ezidumile.
Faka imephu yesitolo kuhlelo lokusebenza futhi ithuba lokuthi ikhasimende lithole izinto eziningi elizothenga likhulu.
Isitolo sehadiwe iLowes ifake ipulatifomu ye-shopper yeselula kuhlelo lokusebenza lweselula lukaLowe ukuthuthukisa ulwazi lwabathengi. Ikhasimende lingasesha umkhiqizo futhi libone ngokushesha ukutholakala kwempahla kanye nendawo yento emephini yesitolo.
Ibhonasi eyengeziwe yokufaka amabhekhoni kuzinhlelo zokusebenza ukuthi inyusa inani labasebenzisi bohlelo lokusebenza, ithuba lokuthengisa online, kanye nokubandakanyeka komkhiqizo jikelele.
Isibonelo 3: Ukwenza ngezifiso kwamakhasimende okuthuthukile
Amabhizinisi we-Ecommerce asevele enikeza okuhlangenwe nakho kokuthenga okwenzelwe wena ngokujulile. Bangakwenza lokhu ngokususelwa ekulandeleni okuthuthukile okusatshalaliswe ku-inthanethi yonkana. Akudingeki ukuthi ube yi-shopper ku-Target ye-Target ukuze wazi okuthandayo. Bangathenga lolu lwazi ku-Facebook nakwezinye izinsiza eziningi.
Kumabhizinisi ezitini nodaka, lokhu kungaba nzima kakhulu ukukuqalisa. Ngenkathi benabalingani abathengisayo abalalela futhi bazulazule ukuze bathenge, bazi kuphela lokho abakutshelwa yikhasimende.
Ngobuchwepheshe be-app beacon, izitolo zezitini nodaka ngokuzumayo ziyakwazi ukungena kumasethi wedatha wokulandela ngomkhondo kanye ne-analytics kuze kube manje esetshenziswa kuphela yi-ecommerce.
Ngama-beacon nezinhlelo zokusebenza ezixhumana, ikhasimende lingathola ukunikezwa okwenzelwe wena, amakhuphoni, nezincomo zomkhiqizo ngokuya ngemikhuba yokuthenga yangaphambilini.
Ukungeza ukulandelwa kwendawo ngaphakathi kwesitolo kungavumela uhlelo lokusebenza ukuthi lazi kahle ukuthi ikuphi ikhasimende futhi kusebenze izincomo nokunikezwa ngokususelwe kulokho.
Cabanga nge-shopper ephequlula esigabeni sezingubo. Lapho bengena emnyangweni wejean, bathola isaziso se-push nesaphulelo esingu-25% sekhuphoni esihle salolo hambo lokuyothenga ibhulukwe. Noma mhlawumbe bancome umkhiqizo othize osendalini namuhla, ngokuya ngokuthenga kwangaphambilini.
Ukuqaliswa Kwama-Beacon Ukutshalwa Kwezimali Kwezobuchwepheshe Ezingabizi kakhulu
Njengoba sishilo ekuqaleni kwendatshana, ubuchwepheshe beacon buxhomeke ku-transmitter (beacon), receiver (smartphone) kanye ne-software (app).
Ukukhanya okudlulisayo akuyona ukuthenga okubizayo. Kunabakhiqizi abaningi bamabhekhoni, njenge-Aruba, Beaconstac, Estimote, Gimbal, neRadius Network. Izindleko zincike ebangeni lesiginali yebhekhoni, impilo yebhethri, nokuningi ngamaphakethe ayi-18 wamabhekhoni wamabanga amade avela ku-Beaconstac abalelwa ku- $ 38 nge-beacon ngayinye.
Isamukeli (i-smartphone) yingxenye ebiza kakhulu yenqubo, kepha ngenhlanhla kubathengisi leyo ndleko isivele ihlanganiswe ngamakhasimende abo aphethe izingcingo. Izinombolo zakamuva ziyakhombisa I-smartphone eyizigidi ezingama-270 Abasebenzisi e-United States, emhlabeni wonke lelo nani licishe lifike ku-6.4 billion, ngakho-ke imakethe igcwele.
Izindleko zokufaka ubuchwepheshe be-beacon kuhlelo lokusebenza ziyinani elincane kuphela le- izindleko zokuthuthukisa uhlelo lokusebenza, ngakho-ke ngeke wephule ibhange ngokufaka izinzuzo kuhlelo lwakho lokusebenza.
Uma ungathanda ukuthola umfutho ezinombolweni zakho zokuthengisa, siphakamisa ukuthi ubheke kakhulu emathubeni obuchwepheshe be-beacon anikwe amandla okuhlinzeka ngebhizinisi lokuthengisa.
Ubuchwepheshe abubizi kakhulu ngamandla wokuthola inzuzo enkulu. Kumele nje uqhamuke nohlelo lokumaketha ukuheha abathengi bakho ngezinhlinzeko ezinhle futhi ubhekise ekuziphatheni kwamakhasimende abo futhi uzoba seqenjini elikhethekile labathengisi be-beacon abanikwe amandla wohlelo lokusebenza.
Tags: Arubaidivayisi beaconizibonelo zezinkanyisoizibalo zebhekoniubuchwepheshe beaconama-beaconsI-BeaconstacCVSumhlaba we-disneyeddystoneIsilinganisogeolocationI-Gimbalkfckrogerizinhlelo zokusebenza ezisuselwa endaweniMcDonald'suhlelo lokusebenza lweselulaamabhikhoni weselulaukuzenzelainethiwekhi ye-radiusukwenza ngezifiso okuthengisaukuthengisa okuthengiswayoindlela yokuziphatha yezitoloukuziphatha kokuthengaubuchwepheshe be-smartphoneesitimeleniumgomo
UMichael uthole iziqu kusayensi yamakhompiyutha neyebhizinisi, ngokuhamba kwesikhathi waphothula ngeziqu eziphezulu ezinhlelweni ezihlonishwayo zemultimedia eDenmark. Okukhethekile kwakhe kufaka phakathi ukuzama ubuchwepheshe bedijithali, ukuqondiswa kokudala, ukwakhiwa kwe-UI / UX yohlelo lokusebenza lewebhu futhi ungumsunguli Ugqozi Visual.